वेब स्क्रैपर विशेषताहरू - सेल्टल्ट विशेषज्ञ
वेब स्क्रैर क्रोम ब्राउजर एक्सटेन्सन हो । यो एक्स्टेन्सनको साथ, तपाइँ एक साइटमैप वा योजना सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, जुन साइट नेविगेट गर्न र यसको डाटा हटाउन सबैभन्दा उपयुक्त तरिका देखाउँछ।
तपाईंको साइटमैप पछि, वेब स्क्रैपर पृष्ठ पछि स्रोत साइट पृष्ठ नेभिगेसन र आवश्यक सामग्री स्क्रैप हुनेछ। निकालिएको डेटा CSV वा अन्य ढाँचाको रूपमा निर्यात गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, यो एक्सटेन्सन बिना कुनै समस्या Chrome Store बाट स्थापना गर्न सकिन्छ।
वेब स्क्रैपर को केहि विशेषताहरु लाई तल उल्लिखित उल्लिखित छन्
बहु पृष्ठहरु (1 9)
स्क्रैप गर्न को लागी उपकरणमा धेरै देखि डेटा निकाल्न को क्षमता छ वेब पेजहरू एकैसाथमा यदि यो साइटमैपमा निर्दिष्ट गरिएको छ। यदि तपाइँलाई 100-पज गरिएको वेबसाइटबाट सबै छविहरू हटाउन आवश्यक छ भने, यो तपाइँका प्रत्येक पृष्ठहरू जाँच गर्नका लागि समय-उपभोग हुन सक्छ र थाहा पाउनुहोस् जुन छविहरू समावेश छन् र कुन होईन। त्यसोभए, तपाइँ उपकरणलाई प्रत्येक पृष्ठमा छविहरूको जाँच गर्न निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ।
उपकरणको भण्डारको सोउडडीबी वा ब्राउजरको स्थानीय भण्डारण (1 9)
उपकरण स्टोरले साइटम्यापको ब्राउजरको स्थानीय भण्डारणमा वा हटाउछ वा सोचडीबी (1 9)
हटाउन सक्छ। बहुविध डेटा (1 9)
धेरै प्रकारका डाटाहरूसँग उपकरणले गर्न सक्दछ किनकि, प्रयोगकर्ताहरूले एउटै प्रकारका डाटाहरू एकै पृष्ठमा निकासीका लागि चयन गर्न सक्दछन्। उदाहरणका लागि, यो एकै समयमा वेब पृष्ठहरूबाट छवि र पाठ दुवै स्क्रैप गर्न सक्दछ।
गतिशील पृष्ठहरु (1 9)
वेब स्क्रैपर देखि स्क्रैप डेटा यति शक्तिशाली छ कि यसले अजैक्स र जाभास्क्रिप्ट जस्तै यस्तो गतिशील पृष्ठहरु बाट डाटा को स्क्रैप गर्न सक्छ।
निकाले गए डेटा हेर्न को लागी क्षमता (1 9)
उपकरण प्रयोगकर्ताहरुलाई स्क्रैप गरिएको डेटा हेर्न को लागी पनि निर्दिष्ट नाममा बचत गरिएको छ
यसले CSV (1 9)
वेब स्क्रैपर निर्यातलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा CSV को रूपमा निकाले डाटा निर्यात गरेको छ, तर यो यसलाई अन्य ढाँचामा निर्यात गर्न सक्छ। )
निर्यात र आयोत Sitemaps
तपाईंलाई sitemaps धेरै पटक को उपयोग गर्न को लागी हुन सक्छ ताकि उपकरण अनुरोध मा साइटमैप आयोत र निर्यात गर्न सक्छ।
मा निर्भर गर्दछ केवल क्रोम ब्राउजर मात्र (1 9)
दुर्भाग्यवश, यो सट्टा एक फ्याकब्याक हो कि यो लाभ हो। यो विशेष रूपले क्रोम ब्राउजरको साथ काम गर्दछ।
अन्य डेटा स्क्रैपिंग उपकरणहरू
त्यहाँ केही सरल छन् डाटा स्क्रैपिंग उपकरणहरू जुन तपाईंको लागि उपयोगी हुन सक्छ। यसको केही तल सूचीबद्ध छन्।
यो ढाँचा सबैको स्क्रैप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंको वेबसाइटको सामग्री। सामग्री स्क्रैपिंग यसको मात्र कार्य होईन। यो स्वत: परीक्षण, निगरानी, ​​डेटा खनन, वेब क्र्रालिंग, स्क्रिन स्क्रैपिंग र धेरै अन्य उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. विजेट (16 )
तपाईं स्किनमा Wget पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै संग एक सम्पूर्ण वेबसाइट बलात्कार तर यस उपकरणको साथमा कम कमब्याक छ, यसले सीएसएस फाइलहरू पार्स गर्न सक्दैन।
(7 9) 3. तपाईले आफ्नो वेबसाइट को सामाग्री लाई स्क्रैप गर्न को लागी निम्न आदेश को उपयोग गर्न को लागी यो पनि अलग गर्न को लागी पनि गर्न सक्छन्: